Ogaden News Agency (ONA) – Jaamacada Gaarisa oo Si Rasmi Ah Dib Loogu Furay.
Jaamacada Gaarisa oo Si Rasmi Ah Dib Loogu Furay.
Jaamacadda Gaarisa ayaa si rasmi ah dib loogu furay, sagaal bilood kadib markii koox Al-Shabab ka tirsan ay weerar ku qaadeen jaamacadda ooy ku dileen 150 qof oo u badnaa arday Jaamacada wax ka baran jiray.
Sida ay sheegtay warbaahinta Kenya oo soo xiganeysa mas’uuliyiinta Jaamacadda, waxaa shalay si rasmi ah u shaqo bilaabay shaqaalaha Jaamacadda iyadoo ardaydayna la filayo inay jaamacadda ku noqdaan maalinta Isniinta ee soo socota.
Si loo suggo ammaanka, oo looga hortago weerar lamid ah kii lagu qaaday Jaamacadda, ayaa fariisin boolis lagu soo kordhiyay dhismaha Jaamacadda. Weerarkii Bishii April ee sanadkii hore lagu qaaday jaamacaddan, ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ay Al-shabab ka fuliso gudaha dalka Kenya.
Markii uu weerarkan dhacay ayaa jaamacadda ay bahwadaagta yihiin ee Eldoret, waxay u yaboohday 650 ardayda jaamacadda ah inay wax barashadooda ka sii wadan karaan halkaa, lamana oga inay ku soo noqonayaan jaamacadda iyo in kale.